Mapuraneti Ikea - Tsvaga ese masitayera ekushongedza imba yako | Bezzia
Susana godoy | | Musha
ari Ikea varimi vanogona kuve vakasiyana kwazvo. Saka kana iwe uchida kushongedza imba yako, zvese mukati nekunze, haugone kupotsa mamwe emazano avo nekuti ivo vanokushamisa. Nekuda kwekushongedza, isu tinogara tine sarudzo dzakasiyana uye zvinoreva kuti tinogona kuzvisungirira kumakona ese eimba yedu.
Sezvo isu tichinyatso kuziva, Ikea haigone kusavapo kune vese. Sei kana tichida iyo fanicha, izvo zvekushongedza hazvigone kusiiwa parutivi. Naizvozvo, inguva yekubheja pamazano makuru seaya atichakuratidza izvozvi, kuti ugone kusarudza iyo inonyanya kufanana nezviri kutsvakwa neimba yako.
1 Rectangular planter ine tsoka dzehuni
2 Ikea mapuraneti akagadzirwa neasina kupera
3 Kubata kwekupenya muhari dzako
4 Ikea varimi vekunze uye kwavo kukuru sarudzo
Rectangular planter ine tsoka dzehuni
Mumwe wevagadziri veIkea wandinoda zvakanyanya ndeuyu. Nekuti ine akakora rectangular kupedzisa uye yakapusa sitaira yatinoda. Uye zvakare, ine saizi yakakwana kuiswa padhuze nemahwindo uye kuwedzera mamwe mwenje uye kugona kune yedu yekushongedza yemukati. Asi hazvisi izvo zvese, zvakare ine hwaro hwehuni kana tsoka. Chii chinoita kuti iyo yakasikwa irambe ichipinda zvishoma zvishoma mumba medu. Yakanaka kune zvidiki zvidiki zvine yakazara maruva maruva.
Ikea mapuraneti akagadzirwa neasina kupera
Isu tiri pachena kuti yakasimba se Ikea inogara yakagadzirira kugara ichipa yayo yakasikwa uye minimalist maitiro kuti hatimboneta kutaura nezvazvo. Nekudaro, mune izvo zvekushandisa, machira akagadzirwa nemaoko uye echisikigo uye ekupedzisa ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzekufunga nezvadzo. Iwe unogona zvakare kuwedzera ivo kune yako yekushongedza uye kwete chete kufunga nezve iyo rustic kubata asi zvakapusa nyore. Nzira yekubheja pane kunaka kuravira. Mune ino kesi, iyo hombe huzhinji hweiyo hombodo dzakapoteredzwa uye dzakakwirira, zvichisiya kumashure kweyakakora imwe yatakambotaura kare. Iwe unofarira aya marudzi emafungiro eimba yako?
Kubata kwekupenya muhari dzako
Zvese zvendarira nesirivheri vaviri vevanyowani vako vanobatsirana kuti upe iyo inopenya kupedzisa iyo yatinoda zvakanyanya. Iyo inopfuura yakakwana pfungwa kune yega yega uye yega kona yekona yeimba yako. Mune ino kesi, zvese zviri zviviri Unogona kuzviisa mumba pamwe nekunze nekushongedza materu ese navo. Nekuti ivo vane saizi ine hungwaru saizi zvinoreva kuti iwe unokwanisa kuzviisa padhuze nepadhuze nepasherufu. Chokwadi iwe uri kutofunga nezve kwekuvaisa!
Ikea varimi vekunze uye kwavo kukuru sarudzo
Kunyange isu tichida zvemukati, zvekunze hazvisi kumashure kumashure. Saka iyo firmwo inotisiya isu takashama neakasiyana akasiyana sarudzo. Tinoda vane izvo huni kupedzisa semasvingo ekuratidzira panze. Asi zvakare kuumbwa kwepoto nendiro ndeimwe yemafungiro akanyanya kutsvakwa. Zvakadii ne trellis? Ehe, iro jira rinosungirirwa kumadziro uye kubva kwatinogona kuona kuti zvirimwa zvichakwira sei zvishoma nezvishoma. Ichave zvakare inopfuura yakashongedzwa zvakakwana kune yako masitepisi kana mapindu.
Hatina kukwanisa kurega iyo mapoto akarembera. Nekuti mune ino kesi tinogona kutaura kuti vekunze vanofara kuperekedzwa navo, asiwo zvemukati. Sezvo vane zvimiro zviri nyore chaizvo zvekurembera kwaunoda zvakanyanya. Ehe uye zvese izvi pamitengo inodhura kwazvo kuti tikwanise kuona kuti hazvinyanye kudhura kuva nezvose zvekushongedza zvatinoda. Ndeupi waunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Ikea varimi: Tsvaga ese masitayera!
Maitiro ekuchenesa mabhurashi ekuzora